Somalia - Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Wakiiladda sinaanta u dooda shaqadoodu waxa ay tahay inay horay u mariyaan sinaanta oo ay fara-gal ku sameeyaan takoorka ama faquuqqa. Wakiiladda sinaanta u dooda waa shaqaale madax banaan oo aan cidna hoos tagin.
Wakiiladda sinaanta u dooda waxaad xagooda aadi kartaa, haddii aad dareenatay ama aragtay takoor asalkaaga, luuqqadda, jinsiyadaada, diintaada, waxa aad aaminsan tahay, fikraddaada, hawlahaaga siyaasadeed, urur shaqaale, xiriir qoys, da'da aad jirto, nooc jinsiga aad galmo la wadaagayso, xaalad caafimaad, naafanimo ama wax shakhsiyaddaada la xiriira lagu saleeyey.
Wakiiladda sinaanta u dooda shaqadoodu waxa ka mid ah sidoo kale dadka looga cabsida qabo inay takoormaan sida dadka ajaanibta, inay xaaladdooda, xuquuqdooda iyo wadcigooda horay u mariyaan. Waxaa intaasi dheer oo wakiiladda shaqadooda gaarka ah ay tahay inay ilaaliyaan dadka ajaanibta ah ka bixista wadanka iyo inay qabtaan oo u shaqeeyaan qaab wadaninimo ah oo ay ribood ka dhiibaan dadka dadka ka ganacsada.
Wakiiladda cadaaladdu waxay iyagu ku shaqo leeyihiin jinsiga (sida nin iyo naag) ama jinsiga takoorka ku salaysan.
Caawimaadda aad ka helayso wakiiladda sinaanta u dooda
La soo xiriir wakiiladda sinaanta u dooda xafiiskooda u adeegga macaamiisha, haddii lagu takooray ama aad dareentay takoor. Waad la soo xiriiri kartaa sidoo kale adigoo u dacwoonaya qof takoor lagu sameeyey.
Wakiiladda sinaanta u dooda waxay ku siinayaa talooyin iyo warbixino, waxay kaa caawimayaa takoor qof loo geeystay inay la baaraan arintiisa iyo in haddii loo baahdo uu ay hawl-galaan qof la takooray oo xaqqa uu leeyhay uu usoo dhiciyo. Takoorka si loo hubiyo wakiiladdu waxay ka codsan karaan cidda looga shakiyey inay takoorka samaysay inay sharaxaad soo bixiyaan iyo inay ka dalbadaan faah-faahin dheeraad ah oo arinta la xiriirta ciddii kale oo ay khusayso. Wakiiladda sinaanta u dooda dadka shaqaalaha ka ah waxaa saaran waajibaad si qarin sida arimaha xasaasiga ah ee la xiriira qof noloshiisa u gaarka ah arimaha ku saabsan.
Wakiiladda sinaanta u doodaa kuma amri karaan qof shaqaale meel ka ah inuu u shaqeeyo qaabka aad rabto ama inay gaaraan go'aanka aad doonayso. Wakiiladda sinaanta u doodaa sidoo kale kuma amri karaan in qof shaqaale ahi uu badalo go'aan uu gaaray, waana in aad hor iyo horaan ku dhaqaaqdo talaabada ah inaad qaadato ambiill ama rafcaan oo codsato in wax la saxo.
Wakiiladda sinaanta u doodaa caawimaada sharciga ah ee ay bixinayaan waa mid guud ahaan ah talo-siin. Marar dhif ah ayaa wakiiladda sinaanta u doodaa waxay awoodaan ama loo amraa shaqaalahooda xafiisku inay caawiyaan qof takoor lagu sameeyey oo macmiil ka ah oo maxkamadda la tagaan. Taas waxaa shardi u ah in arintu ay tahay mid macne weyn oo xaga bulshada ah ku fadhida si looga hor-tago takoorka.
Dacwadda sida loo sameeyo
Adiga ma lagu takooray? La soo xiriir wakiiladda sinaanta u doodaa oo u soo dir e-mayl, ama soo wac xafiiskooda gargaarka degdega ah ama warqad u soo qor. Kulan ka fool- ka fool ah waa in mar kasta horay looga heshiiyo oo balan loo qabsado. Adeegga xafiisku waa lacag la'aan.
Waxaad ogaataa in aannaan isla wakhti arin cid kale looga dacwooday oo gacanta lagu hayo aanaan gelin, sidaas aawadeed noo sheeg haddii arintaadu meel kale ku maqan tahay oo cid kale ku gudo jirto.
Soo buuxi foomaka dacwadda ee halka ku jira
Dacwad qoraal ah oo aad iskaa u qoran karto ku soo dir (e-mayl ama warqad ahaan)
Waxaad noo soo diri kartaa dacwad aad iskaa u soo qoratay oo e-mayl ahaan ah ama aad warqad ahaan noogu soo dirto. Luuqqaddaha xafiiskayaga lagaga hadlaa waa afka finnishka, iswidhishka iyo ingiriiska. Haddii aad doonto dacwaddaada afkaaga hooyo waad ku soo qoran kartaa. Waxaan jeclaan lahayn in dacwaddaadu ay noqoto ugu badnaa laba bog.
Su'aalahan ka soo jawaab, markaad dacwad soo qoranayso:
Waay aad uga shakiday in, adiga laguula dhaqmay sidan, iyada oo la eegayo waxa aad tahay ama hibadaada iyo haybtaada aawadeed?
Waxa kugu dhacay maxay yihiin, yaadse is leedahay si xun ayuu kuula dhaqmay?
Xaggee iyo goorma ayeey waxa kani ka dhaceen?
Waxa kugu dhacay ma haysataa wax qoraal ah oo faah-faahin dheeraad ahi ku qoran tahay? Ma jiraa qof kaleeto oo waxa dhacay kula arkay oo ka markhaanti noqon kara?
Arinta ma geeysay oo ma u gudbisay meel kaleeto?
Xagee geeysay oo u gudbisay/ama jaa arintaada cidi ma gashay? (sida baarlamaanka xuquuq u doodayaashooda, booliska ama maxkamadda maamulka)
Dacwadda waxaad ku soo liffaaqqi kartaa koobiyada dokkumentiyada muhiimka ah ee arintan ku saabsan.
Ku soo dir dacwadda e-mayl adreeskan: yvv(at)oikeus.fi
Ama ciwaankan boostada:
Xafiiska macaamiisha u adeega ee gargaarka degdega ah
Wakiiladda sinaanta u doodaa taleefankooda gargaarka degdega ah wuxuu furan yahay saacaddaha 10-12. Xafiiska gargaarka degdega ah waxaa arintaada uga heli kartaa talooyin dhakhso ah.
Xafiiska gargaarka degdega ah waxaa laguugu adeegayaa luuqqaddaha finnishka, iswidhishka iyo ingiriiska. Taleefanka kharashkiisa qofka soo waca waa qiimaha caaddiga ah ee shariikaddaada taleefanadu ay kugu dalacato, wax haba yaraatee lacag adeega oo dheeri ahna malaha loomana baahna inaad bixiso wax kale. Haddii aad naga codsato anaga ayaa ku soo wici karna oo kugu soo celin karna.
Bayaanka ku saabsan cunsuriyadda loo gaystay dadka jinsiyadda Afrikaanka leh
Tani waa soo koobid bayaan oo uu sameeyey wakiilka xafiiska wadasinnaanta oo ku saabsan cunsuriyadda ay dareemeen dadka jinsiyadda Afrikaanka leh ee wadankan Finland: Bayaanka ku saabsan cunsuriyadda loo gaystay dadka jinsiyadda Afrikaanka leh